AUTO CHINGON 25 UNID. FEMINIZADAS BIOHAZARD SEEDS
AUTO 4:20 25 UNID. FEMINIZADAS BIOHAZARD SEEDS
SOMANTA 3 UNID. FEMINIZADAS BIOHAZARD SEEDS
GODDESS KALI 1 UNID. FEMINIZADAS BIOHAZARD SEEDS
CRIMINAL JACK 25 UNID. FEMINIZADA BIOHAZARD SEEDS
BIG LIGHTS 1 UNID. FEMINIZADAS BIOHAZARD SEEDS